Ismaaciil Cumar Geel oo ku Macneeyey Somaliland Ambad Jahawareersan – Rasaasa News
Ismaaciil Cumar Geel oo ku Macneeyey Somaliland Ambad Jahawareersan
Dec 2, 2011 Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geel oo ku Macneeyey Somaliland Ambada Jahawareersan
D,jbouti, November 02, 2011 [ras] – Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo waraysi dheer siiyey wargayska wax ku qora afka faransiiska ee Jeune Afrique, ayaa ku tilmaamay Somaliland dad ambada oo Jahawareersan oo garan la,a meel ay jihadu ka jirto.
Madaxweynaha Geele oo todobaadkii tagay dhamaadkiisuu uu marti u ahaa Madaxweynaha maamulka Somaliland Siiraanyo, ayayna inaba saxaafada dalka Jabuuti waxba ka odhan imaatinkiisa dalka Jabuuti.
Dalka Jabuuti oo ay aad isugu saaxiibo u ahaayeen madaxweyne Riyaale oo maamulka Somaliland uga horeeyey Siiraanyo, ayaa intuu uu madaxweynaha ahaa waxyaabo badan ka suurto galiyey dalka Jabuuti.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo waraysi siinayey wargayska Jeune Afrique ayaa la waydiiyey su,aal ahayd madaxaad ka wada hadasheen madaxweynaha maamulka Somaliland, wuxuuna ku jabaabay waxaan talo ku siiyey in ay ku noqdaan walaalahooda ay ka cadhoodeen .
Waxaa kale oo wargaysku waydiiyey madaxweyne Geele maxaad u aqoonsan wayday Somaliland, Daafuur waad aqoonsataye? madaxweyne Geele ayaa ku jawaabay “Somaliland wadadii la mari lahaa way garan wayday.” Wuxuuna ku tilmaamay Somaliland Gaadhi-dameer, intii ay dameerka jiidaya gaadhiga hor marin lahaayeen ayey dameerkii xaga dambe mariyeen.
Geele ayaa sheegay in Daafuur ay martay wada sax ah oo ka mida wadooyinka xornimodoonka loo maro wayna heshay xoriyad.
Madaxweyne Geele oo wax laga waydiiyey sababta gabalka Ogaden oo xornimo doon in badan ahaa ay xornimo u heli waayeen, ayaa yidhi waxaan maqashiisnahay in dhulkaas haatan nabad iyo wanaag badan ka jiro, yahayna degaanka ugu fiican dhulka Somalidu degto.
Laakiin wadadii ay hore ugu joogeen waxaa ka leexiyey Janan uga yimid Jamhuuriyada jabtay ee Somaliya deedna jabiyey.
Geele oo ka hadlay waxyaabo badan oo ku saabsan Somalida iyo geeska Afrika, ayaa yidhi Somaliya hada ayey ugu dhawdahay in ay ku guulaysato in deganaan iyo dawladnimo, waayo aduunka oo dhan ayaa haatan ka qayb galaya dajinteeda.
Ethiopia: Cabdiraxman Gurey oo Loo Magacaabayo Qusul